Dia mankany Phuket | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Inona no ho hita, Tailandia
Tapitra ity farany mahatsiravina taona 2020 ity. Afaka manomboka manantena isika fa hamela ny areti-mandringana any aoriana any ary amin'ny fotoana hafa dia afaka handeha am-pilaminana indray isika. Ary rehefa toy izany dia ahoana Phuket?
Phuket dia ny perila any Thailand. Ny tsara indrindra raha maniry morontsiraka paradisaaka ianao, fialamboly, fialan-tsasatra ary tontolo iainana iraisam-pirenena. Aorian'ilay areti-mandringana, soa ihany fa hanohy any i Phuket ary handray antsika amin'ny tànana malalaka tokoa.
Izany dia faritanin'i Thailand, atsimo avy any amin'ny firenena. Izany koa Nosy lehibe indrindra any Thailandy ao amin'ny ranomasina Andaman. Manana mahafinaritra fitaomana sinoaBetsaka ny toerana masina sy trano fisakafoanana sinoa na aiza na aiza. Misy mihitsy aza ny Festival Vegetarian Shinoa atao indray mandeha isan-taona, mankalaza kokoa ny lazan'ny vondrom-piarahamonina sinoa eo an-toerana.
Nosy Pghuket manana morontsiraka tsara tarehy maro izy, ao anatin'izany i Karon, Kamala, Kata Noi, Patong na Mai Khao, ary angamba ny toerana tsara indrindra hahitana ny filentehan'ny masoandro eto an-tany: Laerm Phromthep. Saingy tsy ny zava-drehetra dia morontsiraka manodidina eto, misy ihany koa lalam-piainana sy làlana manan-tantara maro izay manasa anao hahalala ny lasany.
Ka andao atomboka amin'ny Phuket taloha, ilay tanàna talohaTsara amin'ny fikarohana sy fahafantarana ny tanàna sy ny mponina ao aminy, ny Thai, ny sinoa, ny eropeana ary ny silamo izay nisafidy ny hipetraka eto. ny maritrano Amin'ny tranga sinoa maro - fomba Portiogey, amin'ny lafiny roa amin'ny arabe, ary tsara tarehy izy ireo ka ny sasany dia navadika ho tranombakoka na trano fisakafoanana na fivarotana na trano fandraisam-bahiny. Tsidiho, ohatra, ny Phuket Thai Hua Museum.
Amin'ny alàlan'ny arabe ao afovoan-tantara no ahafahanao manandrana ny sakafo ao an-toerana, maka sary ny olona mipetraka ao ary mahatsapa ny kolontsaina. Raha amin'ny Alahady ianao dia afaka mankafy ny tsena eny an-dalambe, ny Lat Yai, tsara raha manandrana karazan-tsakafo rehetra.
Miala atsimo amin'ny lalana mankany Phuket taloha. I Ko Racha dia manana nosy roa, Ko Racha Noi sy Ko Racha Yai. Samy tsara avokoa morontsiraka fasika fotsy sy rano madio mangarahara tena mety amin'ny antsitrika. Ko Racha Yai dia manana fitaovana rehetra, fa Ko Racha Noi no tsara indrindra amin'ny antsitrika ary raha ny marina dia busos matihanina ihany no mahazo alalana satria misy ny stingray sy antsantsa fotsy.
Etsy ankilany dia ilay nosy kelin'i Ko Mai Thon, atsimo atsinanan'ny Phuket, 15 km fotsiny, miaraka amoron-dranomasina mahafinaritra kokoa. Ireo mpandeha manana fotoana kely dia mazàna mamakivaky eto satria tonga amin'ny sambo haingana izy io. Ny morontsiraka mangatsiaka iray hafa dia Hat Patong. Izy io dia ao amin'ny helodrano curvilinear misy fasika fotsy ary ny mety fampiharana ny fanatanjahantena rano fizahan-tany rehetra. Mandritra izany fotoana izany dia misy tanàna kely manodidina azy, ampy fitaovana amin'ny tranga rehetra misy fivarotana, hopitaly, trano fisakafoanana ary hotely.
Hat Nai Yang dia morontsiraka iray hafa, hita ao amin'ny valan-javaboary Sirinath ary miaraka amin'ny zaridaina kesika tsara tarehy. Voahodidin'ny haran-dranomasina izy ary betsaka ny fiainana an-dranomasina, indrindra ny sokatra an-dranomasina izay teraka tamin'ny volana novambra ka hatramin'ny febroary. Ity ihany koa dia tratry ny fiara, an-dalana, avy any Phuket, mamela ny tanànan'i Thalang any aoriana. Etsy ankilany, Hat suron Izy io dia morontsiraka kely eo am-pototry ny havoana rakotra hazo kesika izay lasa golf ho an'ny Mpanjaka Rama VII.
Somary mideza ny morontsiraka ary rehefa orana dia matanjaka be ny onja ka tsy afaka milomano ianao. Ny morontsiraka dia 24 kilometatra miala ny tanànan'ny Phuket. Ny morontsiraka iray hafa mangina sy madio dia Hat Laem Sing, miaraka amin'ny haran-dranomasina sy hazo manome alokaloka. 1 kilometatra monja avy eo Hat Surin, atsimo io. Izany hoe, miaraka amoron-dranomasina be dia be ao Phuket, ny tena zava-dehibe dia ny mankafy ny masoandro, ny ranomasina ary ireo hetsika eny amoron-tsiraka: sambo, antsitrika, snorkeling, fitetezana rivotra, sns.
Niresaka tamin'ny voalohany izahay iray amin'ireo toerana tsara indrindra eto an-tany hijerena ny filentehan'ny masoandro: Laem Phromthep. Izy io no teboka farany atsimo amin'ny nosy, kapa, mety tsara amin'ny fakana sary mahafinaritra. Avy amin'ny sisin'ny hantsana dia ahitanao andalana hazo palmie mitsivalana amin'ny lavaka mangitsokitsoka, misy vato ao amin'ny ranomasina ary any ankoatr'izay dia miseho ny nosy Ko Kae Phitsadan. Misy jiro koa, naorina tamin'ny Jobily volamena an'ny Mpanjaka Rama IX, ary avy eo dia mahatratra 39 kilometatra ny fijery.
Tranonkala Phuket malaza hafa, notsidihan'ny mpizahatany rehetra, ny Tempolin'i Wat Chalong, tempoly manan-tantara mampahatsiahy ny sarina moanina iray, Luangpho Chaem avy any Wat Chalong, tompon'ny mediteran'i Vipassana sy ny fitsaboana nentim-paharazana. Nomen'ny Mpanjaka Rama V laharam-piangonana izy io ary ireo entana amidy eto, amulets, dia inoana fa hitondra fiarovana sy harena tsara. Toerana iray hafa tsy azo ihodivirana ny Buddha lehibe Phuket, eny an-tampon'ny havoana, mampamono tokoa.
Fotoana tsara handehanana any Phuket, raha tianao ny manao fety dia mandehana amin'ny Taom-baovao Sinoa Phuket, aorian'ny Taom-baovao Sinoa. Ny tanjon'ity festival faharoa ity dia ny hampiseho ny fiainana eo an-tanàna ary hanome traikefa lehibe ny mpizahatany satria maro amin'ireo arabe ao amin'ny foibe manan-tantara no mihidy amin'ny fiara ary lasa mpandeha an-tongotra.
Hay matso miloko, olona miakanjo akanjo nentim-paharazana, fampisehoana fampisehoana sakafo, fivarotana sakafo na aiza na aiza ary hetsika hafa. Ny andro farany dia ny Fetin'ny vavaka, fomba amam-panao taloha.
Taorian'ny onjan'ny hetsika niaraka tamin'ny olona maro tao Phuket dia ny Phuket Fantasea Theme Park, seho natokana ho an'ny kolontsaina Thai. Ny zavatra tsara indrindra momba izany dia ny fampisehoana antsoina Kamala mahagaga, fitambaran'ny zavakanto sy kolontsaina Thai miaraka amin'ny vokatry ny feo, jiro ary mozika ary elefanta 10 sy biby hafa amin'ny sehatra lehibe. Buffet no aroso ary misy fivarotana fahatsiarovana ihany koa. Misokatra isan'andro izany raha tsy ny alakamisy, manomboka amin'ny 5:30 maraina ka hatramin'ny 11:30 alina.
Hatreto, ny fijerena ireo hatsaran-tarehin'i Phuket, saingy alohan'ny hamaranana dia mamela ny sasany isika torohevitra momba ny dia mankany Phuket:
. Ny morontsiraka amin'ny morontsiraka atsimo no be mponina indrindra, fa ny any avaratra kosa mangina ary vitsy ny olona. Any atsimo ny fety.
. Ny morontsiraka rehetra lehibe kokoa (Kata, Karon, Nai Han, Patong, Nai Han, Nai Yang, Mai Khao), dia manana fotodrafitrasa sy fitaovana hanaovana antsitrika, fitetezana rivotra ary sambo.
. Phuket dia toerana azo antoka ary azo antoka, na amin'ny alina aza.
. Afaka mihodina manodidina ny tanàna amin'ny alàlan'ny tuk-tuk ianao, misy taxi, bus, moto manofa ary fiara. Ny tuk-tuks eto dia tsy mitovy amin'ireo ao Bangkok, fa manana kodiarana 4 izy ireo ary mena na mavo. Ny bisy, ny Phuket Smart Bus, dia miala amin'ny morontsiraka ka hatramin'ny morontsiraka, ary avy amin'ny seranam-piaramanidina, ary mety. Mividy Kara-bitro any ambony na any amin'ny magazay ianao ary dia izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Dia Phuket
Inona no ho hita any Baiona, Galicia